The Best dheeldheel Parks In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > The Best dheeldheel Parks In Europe
Haddii aadan hubin kuwaas oo beeraha dheeldheel Yurub u fiican, ka dibna eegto wax dheeraad ah. article Tani waa liiska qaar ka mid ah jardiinooyinka dheeldheel ugu fiican ee aad booqan kartaa in Europe hadda! Waxaan idin siin doonaa sharaxaada faahfaahsan kasta iyo sida aad ka heli kartaa iyaga oo tareen. Sidaas daraaddeed ha ka bilowno liiska!
Ugu weyn ee Miyeyydaan wax Park ee Europe - Disneyland Paris
Haddii aadan booqday, aad shaki la'aan maqlay oo ku saabsan Disneyland ee Paris. park waxaa ka mid ah wax kasta oo ka mid ah ka heli kartaa in Disneyland asalka ah ee Maraykanka. Plus, waxaa ka mid ah laba beeraha theme iyo guud ahaan todobo hotels on-site! u badan tahay waxaad u baahan tahay dhowr maalmood haddii aad rabto in aad soo booqato walba. Intaas waxaa sii dheer, Waxa kale oo aad booqan kartaa Walt Disney Studios in ay xaq u socda si ay beerta.
Marka ay timaado in gaarey park, waa ay sahlan tahay in halkaas tagto tareen. Mid ka mid ah xarumihii ugu tareen dhexe ee France waa xaq ee soo socota si Disneyland. Xaruntu waxay su'aashu waa tareenka Marne-la-Vallee / Chessy, oo si fudud aad u gaarto karaa meel kasta oo France ama ka baxsan. Waa maxay more, Disneyland aan ku yaalaa meel aad u fog ka Paris.
Paris si ay Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Brussels si Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
Lyon in Tareenadu Disneyland Marne-la-Vallee
Lille si ay Tareenadu Disneyland Marne-La-Vallee
Most Popular dheeldheel Park ee Germany - Europapark
Europapark waa park ugu weyn oo ugu caansan oo dhan of Europe, midig ka dib markii Disneyland. Si kastaba ha ahaatee, in aan sababta aan u doortay. Waa mid ka mid ah beeraha dheeldheel ugu fiican Yurub ee our opinion sababtoo ah rullaluistemadka-coasters. Waxaad heli doontaa in la raaco badan oo iyaga ka mid ah oo u badan kuwa si dhab ah u gaar ah. Waxaad heli doontaa si aad u hubiso Arthur – ka duubin-Siriyalka cusub in isku-dar ah mid ka mid ah gudaha / dibedda la geeyo madow iyo sidoo!
Waxaad ka heli kartaa tan park theme la yaab leh in miridhku, dhow magaalada Freiburg iyo Strasbourg. Taasi micnaheedu waa in aad gaari kartid Europapark si sahlan oo tareen, ka magaalo ka mid ah. The tareenka waa 4 km qaar ka mid ah si aad markaas ku socon kartaa laga galo, ama qaadato mid ka mid ah si joogto ah u basaska kuwa u taga inay park.
Strasbourg si Tareenadu Ringsheim
Stuttgart in Tareenadu Ringsheim
Basel si ay Tareenadu Ringsheim
Offenburg in Tareenadu Ringsheim
Ekayd Capital ee Europe - Efteling dheeldheel Park
Dad badan oo ka dhan guud ahaan Yurub aadan aqoon ku saabsan rajada oo dhan aawadiis ekayd ku caashaqay! Si kastaba ha ahaatee, park waa mid ka mid ah ugu weyn ee dhammaan saddexda dal ee Benelux ah. Waa maxay more, efteling waa meeshii la leeyahay oo dhan sheekooyinka si fiican u yaqaan soo noolaaday! Qaar badan oo ka mid ah sheekooyin classic of Hans Christian Andersen, Charles Perrault, iyo Grimm Brothers ay halkan u timid inaad nolosha. Waxaa loo ciyaaray iyada oo Kumaan balaadhan oo ah raacid, adventures, iyo in ka badan. All oo dhan, waxaad u baahan doontaa ugu yaraan laba maalmood in ay soo booqdaan wax walba oo!
Waxaad booqan kartaa Efteling si cadaalad ah si fudud via tareenka. Waxa uu ku yaalaa xaq u Dhaxeeyey oo dhan magaalooyinka waaweyn ee Holland. Taas ayaa ka dhigaysa park la heli karo dhan ka ah Netherlands iyo meelo ka baxsan. Iyada oo xiriir tareen xaq u, aad gaari kartid park ee meel kasta oo Europe. Taasi waa sababta kale ee Efteling ka mid ah jardiinooyinka dheeldheel ugu fiican Yurub!
Brussels si Tareenadu Tilburg
Antwerp in Tareenadu Tilburg
Berlin si Tareenadu Tilburg
Paris si ay Tareenadu Tilburg
All oo dhan, saddex kuwanu waa xulatay our top. Waxaa jira kuwo kale oo badan in Europe, in qaar, laakiin waxaan dareemayaa in runtii kaliya saddex waa kuwan ugu wanaagsan. Waxaad awoodi kartaa nala soo xiriir haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan beeraha iyo raacid tareenka inay ogaadaan. Sidoo kale, si xor ah u eegno our blog. sida caadiga ah aan qoraal ku saabsan meelo badan iyo raacid tareen qiimihiisu booqashada iyo la qaato guud ahaan Yurub!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-amusement-parks-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de si / fr ama / PL iyo luuqado badan.
#AmusementParks #efteling #PortAventura #traveleurope eurotrip Talooyin safarka tareenka safarka